अटोमोबाइल कर्षण डोरीको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू - समाचार - निङ्बो सलमान इन्टरनेशनल ट्रेड कं, लिमिटेड
अटोमोबाइल कर्षण डोरीको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
अब मानिसहरूको जीवन अधिक र अधिक सुविधाजनक छ, धेरै परिवारहरूको आफ्नै कार छ, तर सबै पछि, कार एक मेसिन हो, राम्रो कार पनि समस्या हुन सक्छ। यदि कार सडकमा बिग्रेको छ र अगाडि बढ्न असक्षम छ भने, कुनै प्रमुख स्टेयरिङ वा ब्रेकिङ समस्या नभएसम्म, यसलाई फिर्ता टाउको र पछि समाधान गर्न सकिन्छ। त्यहाँ टो डोरी चाहिन्छ।
1. निर्दिष्ट लोड भन्दा बढी हुन सक्दैन;
2. कुनै नराम्रो सतहमा तान्न सक्दैन;
3. संरचनात्मक क्षतिको टाउङ्ग मर्मतको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन;
4. ट्रेलर टाँस्दा, यसलाई बलियो र बिस्तारै तान्नु पर्छ, र छिटो तान्न सकिँदैन।
5. टोविङको सामान्य प्रयोग सुनिश्चित गर्न बारम्बार निरीक्षण गरिनुपर्छ।
ट्रेलरको डोरीको एउटा छेउ अगाडिको कारको रियर एक्सल स्टिल प्लेटको अगाडिको छेउमा बाँधिएको हुन्छ, र अर्को छेउ पछाडिको कारको अगाडिको निलम्बनमा गाडीको केन्द्रीय स्थितिमा सकेसम्म नजिक बाँधिएको हुन्छ। दुईवटा कारलाई केही मिटरभन्दा बढीले छुट्याउनुपर्छ। पहिचान मार्करको रूपमा टो डोरीको बीचमा रुमाल बाँध्नु राम्रो हुन्छ।
टोइंग गर्दा, अनुभवी चालकले कार पछाडि चलाउनु पर्छ, किनभने पछाडिको कार नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ, अलिकति लापरवाही वा अनुचित सञ्चालन, ट्रेलर डोरीमा दबाब हुन सक्छ, वा झुकेर, पीछा दुर्घटना हुन सक्छ।
जब ट्रेलर सुरु हुन्छ, कारको तौलको अतिरिक्त बोझको कारण, अगाडिको कारले इन्जिनको गति सुधार गर्न थप इन्धन दिनुपर्छ, र त्यसपछि बिस्तारै क्लच पेडल छोड्नुपर्छ, सुरु गर्नु अघि डोरीलाई बलियो बनाउन दिनुहोस्। सडकको अवस्था राम्रो भए पनि तिब्र गतिमा सवारी चलाउनु हुँदैन ।
जब अगाडिको कार गियर परिवर्तन गर्छ, टो डोरी खुकुलो हुनेछ। यस बिन्दुमा, टाँसिएको कारले ब्रेक लगाउनु हुँदैन। अन्यथा, जब अगाडिको कारले इन्धन भर्छ, ट्रेलरको डोरी अचानक कसिनेछ र प्रभावित हुनेछ। डोरी भुइँमा खस्दा मात्र ब्रेकलाई बिस्तारै ट्याप गर्न सकिन्छ।
यदि ढलान लामो छ भने, तपाइँ डोरी खोल्न सक्नुहुन्छ र दुई कारहरूलाई अलग-अलग तल स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन धेरै सुरक्षित छ। यदि र्‍याम्प लामो छैन भने, तपाईं यसबाट डोरी झुण्डाएर डाउनहिल जान सक्नुहुन्छ। तपाईंको अगाडिको कारले सजिलै ब्रेक लगाउनबाट बच्न सक्छ, जबकि तपाईंको पछाडिको कारले ब्रेकमा ट्याप गर्न सक्छ डोरीलाई सधैँ कसीरा राख्न।
चौराहेमा रोकिँदा अगाडिको गाडीलाई केही ब्रेकमा पहिलो बत्ती, पछाडिको गाडीलाई सिग्नल र त्यसपछि गाडीलाई ब्रेक लगाएर दुवै गाडी रोकिनुपर्छ । घुमाउँदा, तपाईंले ठूलो सर्कल बनाउन ध्यान दिनुपर्छ र खतरामा नहोस् भनेर डोरीलाई कस्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
अघिल्लो:हाम्रो कम्पनीले दुई नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन र विकास गरेको छ
अर्को:हाम्रो कम्पनीले खेत ज्याकको लागि मेसिनरी निर्देशनको सीई प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त गरेको छ